Fampiharana Surfactant amin'ny fizotran'ny fanarenana solika
1. Surfactant amin'ny fitrandrahana solika mavesatra
Noho ny hafanam-po ambony sy ny tsy fitovian'ny solika mavesatra dia mitondra fahasahiranana maro amin'ny fitrandrahana izany. Mba hitrandrahana ireo menaka mavesatra ireo dia ilaina indraindray ny mampiditra vahaolana aqueous an'ny surfactants ao anaty lavadrano hanovana ny menaka mavesatra-viscosity ho emulsion misy menaka ao anaty rano ary hampidina azy etỳ ambonin'ny tany. Ireo zava-mahadomelina ampiasaina amin'ity emulsification menaka mavesatra ity sy ny fomba fampihenana ny viscosity dia misy ny sodium alkyl sulfonate, polyoxyethylene alkyl alkohol ether, polyoxyethylene alkyl phenol ether, polyoxyethylene polyoxypropylene polyene polyamine, polyoxyethylene Ethylene alkyl alkohol ether sulfate sodium sodium, sns. mila manasaraka ny rano ary mampiasa surfactants indostrialy ho mpanala demonia amin'ny tsy fahampian-drano. Ireo mpanala baraka dia emulsifera ao anaty menaka. Ampiasaina matetika ny surfactants cationic na asidra naphthenic, acid asphaltene ary ny sira metaly polyvalent. Ho an'ny menaka mavesatra manokana dia tsy azo ampiasaina ny fomba fitrandrahana paompy mahazatra, ary ilaina ny tsindrona etona mba hanarenana amin'ny laoniny. Mba hanatsarana ny vokatra fanarenana hafanana dia takiana ny surfactants. Ny fampidirana sombin-tsofoka ao anaty tsindrona etona tsara, izany hoe ny fampidirana foza be mpamahana hafanana avo lenta sy gazy tsy milefitra dia iray amin'ireo fomba fanodinkodinana fampiasa matetika.
Ireo mpitsikilo fampiasa matetika dia ny sulfonate alkylbenzene, sulfonate α-olefin, sulfonate solika, ether alkol alika alikaola alkyl sy poletaxyethylene sulfonated ether polyoxyethylene alkyl phenol ety, surfactants gemini manokana, sns. Satria ny surfactants misy fluorine dia manana fiasa avo lenta ary miorina amin'ny asidra, alkaly , oksizenina, hafanana ary solika, surfactants misy fluorine dia mpiorina mamelombelona amin'ny hafanana avo lenta. Mba hahamora ny famoahana ny menaka miparitaka amin'ny firafitry ny tenda amin'ny famolavolana, na ny fanamboarana ny menaka ambonin'ilay fananganana dia ilaina ny mampiasa surfactant antsoina hoe agents diffuse film. Ampiasaina matetika dia surfactants gemini sy resins phenolic alkylated.
2. Ny fitrandrahana solika solika waxy miaraka amin'ny surfactants dia mitaky fanaraha-maso savoka matetika sy fanesorana savoka. Ireo Suractactants dia toy ny mpanakan-tsoroka sy manafoana ny savoka. Ny surfactants azo solika ary ny surfactants tsy voavaha rano dia ampiasaina amin'ny fisorohana savoka. Ilay teo aloha dia mitana ny anjara asan'ny fisorohana savoka amin'ny fanovana ny toetran'ny velarana kristaly savoka. Ny surfactants mora solika matetika dia sulfonat solika sy surfactants amine. Ireo surfactants tsy voavahan'ny rano dia mitana andraikitra amin'ny fisorohana ny savoka amin'ny alàlan'ny fanovana ny toetran'ny velaran-tarehy (toy ny fantsom-piterahana, tsorakazo fampisotroana ary ny velaran'ny fitaovana). Ny surfactants azo ampiasaina dia ny sodium alkyl sulfonate, sira amonium quaternary, ether polyoxyethylene etana, ether polyoxyethylene aromatika ary ny sira sodium sulfonate. Ny surfactants amin'ny fanesorana ny savoka dia mizara roa ihany koa, ny soluble soluble ho an'ny solika fanalana savoka, ny karazana sulfonate tsy voavahan-drano, ny karazana sira amoniôma quaternary, ny karazana polyètre, ny karazana Tantara, ny surf OPant surfactant, ny solifate ester na ny sulfonated ary ny surfactants karazana OP dia ampiasaina ho fanafoanana savoka miorina amin'ny rano. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny eto an-toerana sy ny any ampitan-dranomasina dia samy nanambatra ny fanalana ny savoka sy ny fisorohana, ary koa ny famongorana savoka miorina amin'ny solika sy ny famongorana ny savoka miorina amin'ny rano, mba hamokarana mpamono savoka hybrid. Ity mpandraharaha manala savoka ity dia mampiasa hydrocarbons aromatika sy hidrokarôma manitra mifangaro toy ny faritry ny menaka, ary emulsifier miaraka amina famafana ny savoka toy ny faran'ny rano. Raha ny emulsifier voafantina dia surfionant nonionika misy teboka rahona mety, dia azo atao hahatratra na hihoatra ny rahona rahona amin'ny mari-pana eo ambanin'ny fantsom-pamokarana ao amin'ny lavadrano, mba hahafahan'ny mpamongorana savoka mifangaro alohan'ny hidirana amin'ny faritra savoka, tapaka ny emulsion, ary misaraka ny karazana savoka manala savoka roa, ary mitana ny anjara toeran'ny fanesorana savoka izy ireo amin'ny fotoana iray.
3. Surfactant ampiasaina hampiorenana ny tanimanga
Ny singa miorina amin'ny tanimanga miorina dia manakana ny mineraly tanety tsy hamontsina ary manakana ny poti-mineraly tanimanga tsy hifindra. Izy io dia azo ampiasaina hisorohana ny fotaka amin'ny fivontosana, toy ny karazana sira amine, karazana sira amonioma quaternary, karazana sira pyridine, sira imidazoline ary surfactants cationic hafa. Ny surfactants tsy ionic-cationika misy florine dia misy hisorohana ny fifindra-monin'ny poti-mineraly tanimanga.
4. Suractactants ampiasaina amin'ny fepetra asidra
Mba hanatsarana ny vokatry ny asidra, dia misy karazana additives isan-karazany ampidirina amin'ny vahaolana asidra. Ny surfactant rehetra izay mety mifanaraka amin'ny asidra ary mora voan'ny adsorment dia azo ampiasaina ho retarder acidification. Toy ny amine hydrochloride amine, sira amonium quaternary, sira pyridine amin'ny surfactants cationic sy polyoxyethylene sulfonated, carboxymethylated, phostate masira na sulfate masira ao amin'ny surfactants amphoteric Base phenol ether sns. Ny surfactants sasany, toy ny asidra sulfonic dodecyl sy ny sira amine alkyl, dia afaka emulsify ny asidra ao anaty menaka hamokatra emulsion asidra-anaty-menaka. Ity emulsion ity dia ampiasaina ho toy ny ranoka indostrialy misy asidra ary misy vokany miadana koa.
Ny surfactants sasany dia azo ampiasaina ho anti-emulsifiers ho an'ny rano misy asidra. Ireo mpitrandraka manana rafitra branched toy ny polyoxyethylene polyoxypropylene propylene glycol ether ary polyoxyethylene polyoxypropylene pentaethylene hexaamine dia azo ampiasaina ho asidra manohitra ny emulsifiers. Ny surfactants sasany dia azo ampiasaina ho fanampiana mpanalefaka, toy ny karazana sira amine, karazana sira amonioma quaternary, karazana sira pyridine, surfactants tsy ionic, amphoteric ary fluorised.